Onye mgbasa ozi Belgium na VRT na-ahọpụta Matrox Monarch EDGE maka Concert Remote Production Ọnwụnwa nke na-agaghị agbaghara Beat | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » News » Onye Belgium na-agbasa ozi mgbasa ozi VRT na-ahọpụta Matrox Monarch EDGE maka ule ịgba egwu na-agaghị echefu otu iti
Onye Belgium na-agbasa ozi mgbasa ozi VRT na-ahọpụta Matrox Monarch EDGE maka ule ịgba egwu na-agaghị echefu otu iti
Monarch EDGE encoder / decoder couple na-enye nchebe dị mma, nke dị mma maka njem vidiyo maka egwu egwu egwu si na netwọọdụ mgbasa ozi ọha na eze na Flemish na Belgium.
N'otu ụzọ ahụ nọmba egwu anaghị ada otu ihe na ngwa na-efu, echekwa, njem vidiyo dị elu adịghị ka ọ dị mfe ma dịkwa ọnụ ala na-enweghị Matrox® Monarch EDGE. Maka Flemish Radio na Television Broadcasting Organisation (VRT), Eze EDGE 4K / ọtụtụ-HD encoder na decoder bụ isi ihe na-eme ka egwupụta ihe nkiri (REMI) dị mfe.
Inghaghachi ọrụ mmepụta ndụ
Dị ka ọ dị na ọtụtụ ndị mgbasa ozi ụwa, mmalite nke ọrịa COVID-19 mere ka VRT nwee ike ịmaliteghachi ọrụ mmepụta mgbasa ozi ya. Na nzaghachi, VRT malitere usoro ịme anwansị iji nwalee akụrụngwa na-emepụta ihe dịpụrụ adịpụ ma mesịa chọta ụzọ ọhụrụ ịkekọrịta akụkọ ya. Ihe ha hụrụ bụ na Eze EDGE dị mma maka iji nwayọọ na-ewepụta ihe dị mma, nke na-adịghị ala ngwa ngwa. Site n'adịghị mma dị ntakịrị na iko-na iko ya na ike ya iji nyefee iyi vidiyo na netwọkụ ọha, monarch EDGE encoder na decoder ụzọ - VRT kpebisiri ike - ga-enye ha ohere ịmịpụta vidiyo pụrụ iche mgbe ha na-echekwa ndị ọrụ na nchekwa na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Imepụta ime, dị mfe
The Monarch EDGE encoder na decoder ụzọ mere ya mpụta mbụ na VRT anapụta ndụ iyi si a concert ẹkenịmde ke Ancienne Belgique (French maka "Old Belgium"), a-ama ụwa nile dịkọrọ ndụ music dị na Brussels 'akụkọ ihe mere eme isi. Na Ancienne Belgique, igwefoto SDI abụọ weghaara ndị na-egwu egwu n'otu n'otu na ndị otu ahụ dum wee tinye na ngwaọrụ EDGE 4: 2: 2 10-bit encoding. Ka ọ dị ugbu a, e zigara stereo mix site na soundboard site na iji ntinye ọdịyo ziri ezi nke encoder Monarch EDGE. Igwefoto SDI abụọ na igwe okwu. Monarch EDGE encoder na-ebugharị ndepụta ndị a site na iji usoro SRT gụgharia na 1080i na 20 Mbps na ịntanetị ọhaneze. Nri ndị ahụ rutere n'ime ụlọ nchịkwa mmepụta ihe nke VRT - dịkwa na Brussels - ndị na-anabata ya bụ ngwaọrụ mmezi nke Monarch EDGE. Ntanetị decoded bụ mmepụta dị ka SDI ma tinye ọdịyo n'ime gburugburu ebe obibi na-ebi ndụ ebe ndị na-emepụta belata n'etiti igwefoto abụọ ahụ, agbakwunye ihe eserese, na ndị ọzọ.
Site na gburugburu ebe obibi na-ebi ndụ, akara ngosi vidiyo SDI abụọ abanye na nke abụọ monarch EDGE encoder; otu n'ime nri ndị a bụ nri mmemme mmemme mepụtara nke na-eje ozi dị ka ọwa nloghachi, ebe nke ọzọ bụ ihe mejupụtara multiviewer nke igwefoto raw A na B. The Monarch EDGE encoder weghachite ndepụta ndị a na ntanetị ịntanetị gaa Ancienne Belgique, ọzọ na 1080i na 20 Mbps. Na Ancienne Belgique, ngwa mmeghe nke Monarch EDGE na-ekpepụta ndepụta azụ abụọ. Monarch EDGE decoder na - ewepụta ma nri nloghachi nke mmemme a rụpụtara na ihe nlele na - egosi ihe ndị na - ekiri ha ga - ele, na multiviewer iyi nke eserese esighi na eserese SDI abụọ ahụ.
Mgbanwe, na-ebufe iji zipu njem vidio
Mgbe ihe ịga nke ọma mbụ ya na njem iyi egwu egwu egwu dị na Ancienne Belgique, o doro anya na Monarch EDGE na-enye ọtụtụ uru maka VRT. Dabere na Floris Daelemans, onye nyocha ọhụụ ọhụụ na VRT's Video Snackbar, monarch EDGE encoder na decoder ụzọ bụ kpọmkwem ihe netwọkụ chọrọ iji nwee ike ịnyefe mgbasa ozi, vidiyo ọtụtụ igwefoto n'oge ule, ma hụ na nchekwa nke ndị ọrụ ahụ. na-emepụta iyi. Daelemans kwuru, "Matrox Monarch EDGE tụgharịrị bụrụ ihe dị mkpa maka nnwale mmepụta anyị dịpụrụ adịpụ. "Njikọ njikọta nke SRT na ịdị larịị dị ala, enweghị vidiyo na-enweghị ihu ọhụụ na-eme ka Monarch EDGE bụrụ ngwa ọrụ dị ike nke mere ka ndị otu na-arụ ọrụ mgbasa ozi dị ndụ were nwalee."
soro Video Matrox:
@IGIHE na LinkedIn
@IGIHE on Twitter
@IGIHE na YouTube
Mmekọrịta Media Matrox
Ederede ohuru site na Matrox Media Relations (-ahụ ihe niile)
Matrox na-ekwuputa Kaadị SDI I / O Profile Kachasịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịara Onwere Uche nke Ulo oru Mgbasa Ozi - May 13, 2021
Onye Belgium na-agbasa ozi mgbasa ozi VRT na-ahọpụta Matrox Monarch EDGE maka ule ịgba egwu na-agaghị echefu otu iti - April 29, 2021
Webinar Live: Otu Matrox IP KVM na-edozi ihe ịma aka nke ndị ọrụ ekesara gị - April 15, 2021
Decoder Encoder MATROX Edetị Edge mmepụta nke ime obodo VRT 2021-04-29
Previous: Invictus Entertainment Na-eme Ka Ọnọdụ Ahụhụ Dị Mkpa Na Live Special Specials Iji AJA KUMO 1616-12G
Osote: PNYA "Post Break" na-egosi "Anyị niile bụ ndị ọchụnta ego, Akụkụ nke Abụọ"